juin 2012 – filazantsaramada
« Tsy izao va no fifadiana ankasitrahako: dia ny hamaha ny fatoran’ny faharatsiana. Sy hanaboraka ny fehin’ny zioga, sy ny handefa ny ampahoriana ho afaka, Ary hanapatapaka ny zioga rehetra?… Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an’ny noana va, sy hampiantrano ny manjenjena,… Ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. » Isaia 58: 6-8 Ny fifadiana dia […]
Publié parfilazantsaramada juin 29, 2012 juillet 2, 2012 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fifadiana ankasitrahana
« Ary apetraho aminy ny fanahianareo rehetra ; fa Izy no miahy anareo. Mahonona tena,miambena: fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany; tohero izy, ka miorena tsara amin’ny finoana hianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran’izao tontolo izao. » » Dia Izy no hahatanteraka sy hampihorina […]
Publié parfilazantsaramada juin 22, 2012 juin 22, 2012 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Izy no miahy anareo…
» Raiko ô! eo an-tananao no atolotro ny fanahiko » Lioka 23:46 Rehefa maizina nandritry ny adin’ny telo ny antoandro satria niha-maizina ny masoandro, ary triatra misasaka ny efitra lamba tao amin’ny tempoly, dia io no teny nataon’ny Tompo! Mbola vavaka ihany koa io, satria resaka nataony’i Jesosy tamin’Andriamanitra Rainy. Vavaka mitory inona izao vavaka izao? […]
Publié parfilazantsaramada juin 18, 2012 Publié dansUncategorizedÉtiquettes : religionLaisser un commentaire sur TENY Fito:(7)